ချစ်ခြင်း တူလို့ အပူမျှဝေနိုင်ကြစေ( ညီမလေး ဖတ်ဖို့) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » ချစ်ခြင်း တူလို့ အပူမျှဝေနိုင်ကြစေ( ညီမလေး ဖတ်ဖို့)
Posted by htet way on Feb 3, 2013 in Drama, Essays.. | 18 comments
အလျှော့ပေး စိတ်တွေရှိတယ် ကွယ်။ တစ်ချို့ကတော့ အချစ်ဆိုတာကိုအစာအဖြစ်တပ်ဆင်ပြီးလူကလူကိုမျှားတတ်ကြတယ်။
လေးကလက်လုပ်လက်စားမိသားစုပညာ လည်း မတတ်ကြသူတွေပေါ့ညီမလေးရယ်။
သတို့ သား ကိုအကိုတော့အ့သြမိတယ်။ရွံ့ရှာစိတ်ကိုဖျောက်ထားနိုင်တဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကိုညီမလေးရောမအံ့သြမိဘူးလား။တခါကဆင်းရဲသားလေး
ဇနီးချော လေးကို ခေါ်လို့ ပြန်လာတဲ့အခါစ၇ိတ်ကမလောက်ငှ ရှာ ဘူးလေ။ခ၇ီး တစ်ထောက် ထမင်းစား ဖို့ ကျတော့ သူ့ချစ်သူလေးကိုဆိတ်သားနဲ့ကျွေးပြီးသူကဘေးကထိုင်ကြည့်နေရှာတယ်။ဒီအချိန်ဟာသိပ်ဆာနေတဲ့အချိန်လေ။အကိုကမြင်နေခဲ့တယ်။
“ညီလေးမင်းကိုအကိုထမင်းကျွေးချင်တယ်အကိုစာမူခလေးရလာလို့ပါ” ဆိုပြီးမေတ္တာရပ်ခံပြီးကျွေးလိုက်၇တယ်ညီမလေး။အကို့အသိကောင်လေးပါ။ သိပ်ချစ်ကြတဲ့ချစ်သူအိမ်ထောင်ဘက်လို့အကိုသတ်မှတ်ခဲ့တယ်။သူ့ဇနီးကလည်းအလိုက်သိတတ်တယ်။ သူ့အမျိုးသားအလုပ်ကပြန်လာတာနဲ့ကြိုဆိုပြီးမောင်မောနေလား၊ခဏနားနော်ရေတစ်ခွက်လောက်သောက်လိုက်ထမင်းပြင်ပေးမယ်သိလားဆိုပြီး
ယပ်တောင်ခတ်ပေးလို့ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့နေထိုင်ကြတာအကိုမြင်ဖူးတယ်။အလုပ်ကြမ်း လုပ်ရရှာတဲ့ လင်ယောက်ျားရဲ့ အားပေးဖေါ် အားဆေး တစ်ခွက်
လို့စာအပေါ်အာရုံ မထား ဘဲပျော်ပါး မေ့လျှော့ နေခဲ့တယ် ညီမလေး။ညီမလေးရယ် မိဘက ပညာတတ်စေချင် လွန်းလို့
ကျောင်း ထားတာကိုပညာသင်ချိန် ဘ၀ရဲ့တိုးတက်ရေးတွေကိုရှာဖွေရမယ့် အရွယ် အသိ ဥာဏ် ဖွံ့ဖြိုး မှုနဲ့ အတတ်ပညာတွေကို ၇ှာကြံ
အား ထုတ်ရမယ့် အရွယ် မှာ ပညာသင်ကြားမှုကိုအကြောင်းပြ လို့ ချစ်သူနဲ့ လျှောက် လည်၊
နောက်ဆုံးချစ်သူနဲ့ မသွား သင့်တဲ့ နေရာတွေကို သွားနေတဲ့ မိန်းကလေး တွေကို အကိုတော့
မုန်းမိပါတယ်။ ညီမလေး ရေ အကို့ အသိ တစ်ယောက် နိုင်ငံ ရပ်ခြား ကိုအလုပ် သွား လုပ် မယ်တဲ့ သူ့ သားလေး အတွက်
ငွေ ရှာရမယ် ဆိုပြီး
မလေးရှားကို ထွက် ဖို့မနက်မှာပဲ အကို လိုက်ပါ နုတ် ဆက် မိတယ်။ သူ့ ဇနီးကတော့ မျက်ရည် တွေဝိုင်းလို့၊ အဆိုးဆုံးက
သူ့ သားလေး (၈)နှစ်သားလေးက ဖေကြီး သားတို့ကို
ခွဲပြီး မသွား၇ ဘူး ဆိုပြီး ငိုပါလေေ၇ာ..။ ညီမလေး၇ယ် လေယာဉ် လက်မှတ်တွေစီ စဉ် ဗီဇာတွေ လုပ်ပြီးထွက်ခွာ တော့မယ့်
သူ့၇ဲ့၇င်ထဲဝေဒနာဘယ်လောက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာအကိုစာနာမိပါတယ်။ကလေးကတော့ ဖက်ပြီး ငိုလို့ ၊ အမျိုးသားက လည်း မျက်နှာ မကောင်းတဲ့ကြားက
သူ့သားကိုချော့ လို့ ဘ၀စာမျက်နှာ တွေမှာ ခွဲခွာ ခြင်း တွေ ထဲကမိသားစု အရေး ခွဲခွာ သူတစ်ယောက်ရဲ့ ကြေကွဲ ခြင်းပါ ညီမလေး။
ညီမလေးရေ အိမ်ထောင်ေ၇းကို ဈေးးတွက် တွက် တတ်သူတစ်ချို့ကို ညီမလေး လည်းမြင်ဖူးမှာပေါ့နော်။တလောက မင်္ဂလာဆောင်
တစ်ခု အကို သွားခဲ့တယ်။သတို့ဘက်ကရင်းနှီးတာနဲ့ သွား လိုက်တာပါ။အသက် နှစ် ဆယ်ကျော် အမျိုး သမီးလေးကအသက်
၅၀ကျော် အရာရှိ လူပျိုကြီး တယောက်နဲ့ လက် ထပ် တဲ့ ပွဲ ပါ။
ကောင်မလေးကပျော်လို့ ပြုံးလို့ ။ အကိုက ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ရှာဖွေ မိပါတယ်။ဘယ် လိုအကြောင်းကြောင့် လဲ ဆိုတာကို လည်း
ကောင်မလေးမှာ ချစ်သူရှိတယ် သူ့ ချစ်သူကို ပစ်ပြီးအိမ်ကပေးစားတာ ယူ တယ် ဆိုတာ သမီး အလိမ္မာလေး လို့
ညီမလေးက ထင် ချင်ထင်နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ညီမလေးရေ သူယူလိုက်တဲ့ အမျိုးသားကအသက်ကြီးရင့်နေပြီ တစ်ဦးတည်းသောအမွေ ဆက်ခံမယ့် သူမရှိတဲ့
အချစ်မပါဘဲ၊အကျိုးအမြတ်တွက် ချက် တဲ့ လက် ထပ်ပွဲ တစ်ခု မဟုတ်ဘူးလားညီမလေးရယ်နော်။အဲ့ဒီလိုပဲ
ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စ မရှိတဲ့ အမျိုးသား တွေ
တွေ့ရ ပါတယ် ညီမလေး။ ညီမလေးလည်း အချစ်ကို အစာ အဖြစ် တပ်ဆင်ပြီး လူကို မျှား တတ်သူတွေကို
ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စ နဲ့ အချစ်ပါတဲ့အိမ်ထောင်ရေးကို ညီမ လေး ထူထောင်ပါနော်။လောက လူ့ ဘ၀တိုတိုလေးထဲမှာအတ္တကြီးတဲ့ ၊
သဘောထားသေးသိမ်တဲ့ လူတွေကို ဝေးစွာရှဲပြီး စိတ်အလှ နဲ့ လောကကို အလှဆင်ပါလို့ အကိုပြောပါရစေ။
ချစ်ခြင်း မေတ္တာနဲ့ နားလည် မှုတူအပူမျှဖို့ ချစ်သူ အိမ်ထောင် ဘက်ကို
လည်း စိတ်တိုင်းကျ ရွေး ချယ်နိုင်ပါစေလို့ အကို ဆန္ဒပြု မိပါတယ် ညီမလေး။
ညီမလေးထက် အရင် ဦးမာဃ ဖတ်လိုက်တယ်
ဘဝ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ပေါင်းစပ်ရာမှာ
နှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါ ထည့်တွက်ရတတ်တယ်
အဓိက ပေါင်းမှာက လူနှစ်ယောက်ပေမယ့်
ဘက်ညီတဲ့ အိမ်ထောင်တစ်ခု ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ
နားလည်မှု၊ အလိုက်သိမှု၊ သည်းခံမှုတွေ က အဓိက ကျပါတယ်
ရှေးလူကြီးတွေ ပြောတာ ကြားဖူးတာကတော့
ကိုယ်ချစ်ကို မရှာနဲ့ သူချစ်ကို ရှာ တဲ့
ချစ်ရုံနဲ့မပြီး နားလည်မှုသာ အဓိက ပါလို့
အချစ်ကို သိပ် ဦးစားမပေးချင်သလိုပဲ
ညီမလေး ဖတ်ဖို့ ဆိုပြီးခေါင်းစဉ်ပေးထားပေမယ့် အကိုရည် ညွှန်းတာက
အားလုံး အတွက် ဆိုတာ ငါ့ ညီ သိပါတယ်။
ညီရဲ့ ကွန် မန့်က အကို ပြောချင် တာကို ထင်းကနဲပဲ..အော် စာရေးဆရာ ကျူရှင် ဆရာပေကိုး
ညီမလေးကို ပေးဖတ်ဖို့ အတွက်
ကပေ ဘာတွေ ကော်သွားတာလဲ ………?
လောကမှဖြစ်တတ်တဲ့သဘောလေးတွေပါ…..။ ဘယ်အချိန်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အနဲနဲ့အများတော့ရှိတတ်ပါတယ် ဆရာထက်ဝေးရေ…။ ကိုယ့်အကြိုက်နဲ့ ကိုယ်ပေါ့
ဆရာမောင်ပေ ၊ ဆရာနေ၀န်းနီ
အချစ် မှာ အထိနာ ခဲ့ ကြ သလားဟာဟ
ကိုယ်ရေပြားရောဂါသည်နဲ့ လက်ထပ်တဲ့ ကောင်လေးရဲ့ အချစ်ကို ချီးကျူးပေမယ့် သူ့မိဘသာဆိုရင် ဆိုတဲ့ အတွေးတွေးမိတယ် ဆရာထက်ရေ။
အချစ်ကို ထိတ်မှာထားရင်တော့ … ဂွတ် …..
အချစ်သူရဲကောင်း …၊ ဖေးမကြင်နာတတ်သူ …၊ ချစ်သူအတွက် တုံးတိုက်တိုက် ကျားကိုက်ကိုက် …
အဲ….. သဘာဝကျကျ တွေးရင်တော့ …. အရေပြားရောဂါသည် တစ်ဦးထပ်တိုးလာနိုင်တယ်
လူ့ စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ယုတ်လျော့နိုင်တယ် … တိုင်းပြည်တွက်လည်း မလိုအပ်ပဲ ၀န်ပိစေမယ် …
ဟုတ်ပြီ ….. နောက်တစ်မျိုး စဉ်းစားကြည့် မယ် ..
ကျုပ်သားနဲ့ ရော ..ပေးစားနိုင်မလားးးးးးး
လာ ဂျ ဘာ ဦး ..အရပ်ကတို့ရေ …. အောင်မလေးဗျ ……..
( အတ္တ ဟိတသည် … ပရဟိတနှင့်  တစ်ခါတစ်ရံ လားလားမှမဆိုင် … အချစ်သည်
ဘာရယ်မဟုတ် …ကျနော့ အမြင် သက်သက်ပါနော
မတွေ့ တာကြာလို့ အားရပါးရ ၀င်ပွားလိုက်တာ ……။
ဆရာထက် ပျောက်နေတာ ကြာပြီ ။
ကိုယ်ရေပြားရောဂါသည်လေးကို ချစ်မိရင်တော့ ယူမှာပေါ့ဗျာ ။
အဲဒီ အပိုင်းက သိပ် မထူးဆန်းပါဘူး ။ ချစ်မိသွားပြီကိုးဗျ ။
အဓိက ပြဿနာက ၊ ကိုယ်ရေပြားရောဂါသည်လေးကို ၊
ကိုယ်က တကယ် ချစ်မိဖို့က ခဲယဉ်းတာဗျ ။
ပျောက်နေကြာပေါ့။ ညီမလေး စီးရီးနဲ့ အတူ ပြန် ပေါ် လာလို့ဝမ်းသာပါတယ်။
အချစ်ဟာ ဘ၀ရဲ့ စွမ်း အင် တစ်ခုလည်း ဖြစ်နိုင်ပါ တယ်။ တဲအိမ် ပျက်မှာ နေပြီး တမင်း ရည် ပူ အတူ သောက် ရ ရင်တောင် အသိညာဏ် ရှိတဲ့ ချစ်ခြင်း နဲ့ ပေါင်းစပ် ထား ရင် အဲ လို ဒုက္ခ မျိုး ကို ခဏ နဲ့ ကျော်လွှား နိုင်မှာပါ။
အသက်နှစ်ဆယ်လောက်တုန်းကတော့ အချစ်ဆိုတာဘာလဲလို့ စူးစမ်းဘူးပါတယ်…
အသက်သုံးဆယ်လောက်မှာတော့ အချစ်ဆိုတာကို သေသေချာချာသိပြီလို့ ထင်ခဲ့ဘူးပါတယ်…
အခု အသက်ငါးဆယ်နားနီးလာချိန်မှာတော့ အချစ်ဆိုတာဘာမှန်း မေ့သွားပါပြီ..။
တွက်ချက်ပြီးယူတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဟာ မကောင်း/ မူမမှန်ပါဘူး..
အကြောင်းကတော့ တွက်ချက်တာ မှားနေလို့ပဲ….
” အသက်နှစ်ဆယ်လောက်တုန်းကတော့ အချစ်ဆိုတာဘာလဲလို့ စူးစမ်းဘူးပါတယ်…
အခု အသက်ငါးဆယ်နားနီးလာချိန်မှာတော့ အချစ်ဆိုတာဘာမှန်း မေ့သွားပါပြီ.. ”
မေ့သွားလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲဗျ ။
ဒီ အဖိုးကြီး စာမကျေဘူးလို့ အပြောခံရမပေါ့ ။
သေချာ ပြန် စူးစမ်း အုံး ။
ကိုကြီး အစားရေး ပေးထားသလိုပါပဲ..
ကိုကြီး ကိုယ်တိုင်က ပြောနေသလို ခံစားပြီးဖတ်/မှတ်သွားပါတယ်..
အချစ် ကိုအားမပေးပါ။ လူ ဆိုတာပုံသေတွက်လို့မှမရပဲ။ ဘာပဲပြောပြော ဦးနှောက်နှင့် နှလုံးသား အသိ
ပညာ အားလုံးပေါင်းစပ် ပြီးမှ ရွေးချယ်သင့်တယ်လိုထင်ပါတယ်။စီးပွားရေး၊ပညာရေး၊စာရိတ္တ၊အကျင့် ၊
၊ကျန်းမာရေး၊ အသိုင်းအ၀ိုင်း နားလည်ပေးမူ အားလုံး ကိုယ်ကလက်ခံနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အနေထားလေးရှိ မှ ချစ်ဖို့ကြိုးစားတာ က ရေတို၊ရေရှည် အတွက်ကောင်းပါလိမ့်မယ်နော်။အသက်ကြီးသူ ကို ငွေတစ်ခုတွက် မရွေးချယ်သင့်သလို ကိုယ်ရေပြားရှိသူ ထမင်းတစ်နပ်တောင် မကျွေးနိုင်သူကိုလည်း မရွေးသင့်ဘူး အဲနောက်တစ်ခု က ကိုယ်ရည်းစား နဲ့သွားတဲ့ခါ သူက ဘယ်ကျောင်းကလဲ လို့မေးရင် ……..
(ဒီလိုပဲ တွေးထားလို့လားမသိ ခုထိ…………..)
မင်ဂါဘာလို့ နှုတ်ခွန်းဆက်ဘာဒယ် …
ဟေ့ …. နှုတ်ခွန်းဆက်ဘာဒယ် … ဟေ့ ….
ဆရာထက် … မင်ဂါဘာ ခည …
ပျောက်နေဒါ ကြာပါပေါ့လား ….
ခု … ဒီထဲက ညီမလေး ဖတ်ဖို့ကို
ကျနော်က မှတ်သွားတယ်ဗျာ …
ပြီးတော့ … ကျနော့် ညီမလေးတွေကို ပြန်ပြောပြမယ် ….
အဖို့ကတော့ ဖြစ်ချင်တာထက် ဖြစ်သင့်တာကိုဦးစားပေးစေချင်မိတယ်…
ကျွန်တာ် ဆိုလို ချင်တာ အချစ် တူ ပြီး စကားပြောဖေါ် ခံစားဖေါ် ဖြစ် ဖို့
ပြီးတော့ နား လည် မှု တူညီ ဖို့ ဆိုတဲ့ သဘောပါ။
ကျွန်တာ့်ရဲ့ အအစပိုင်း ဆိုလို ချက် နည်းနည်း အား ခဲ့ ခဲ့ တဲ့ အပေါ်မှာ
နား လည် မှု လွဲစေ ခဲ့ ပါတယ်။ကျွန်တာ် တစ်ကြောင်း လောက် ဖြည့် ရမယ် ထင်ပါတယ်။
အခုလို ရင် တွင်းခံစား ချက်နဲ့ ဖတ်ရှု့ အားပေးကြတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အသက်သုံးဆယ်လောက်မှာတော့ အချစ်ဆိုတာကို သေသေချာချာသိပြီလို့
ကျွန်တာ် လည်း မေ့တေ့တေ့ ပါပဲ။ သတိရအောင် နှိုးဆွ လိုက်တာပါ။
.မင်္ဂလာပါ ဆရာ.မဟာရာဇာ အံစာတုံး/ကျနော့် ညီမလေးတွေကို ပြန်ပြောပြမယ်
….ဆိုတော့ကား..ရွေး ယူတဲ့ အခါ တော့ သတိရှိပါစေ လို့ ။
ဆရာ့ ရဲ့ ..အချစ် ကိုအားမပေးပါ။ လူ ဆိုတာပုံသေတွက်လို့မှမရပဲ။
ဆိုတာလေးကို ကျွန်တာ် သဘောကျပါတယ်။
ကျွန်တာ်ေ၇းတာ အားနည်း ချက် က တစ်ကြောင်း လိုနေပါတယ်
ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်ပါစေ ကူးစက်ေ၇ာဂါ သည်ကိုတော့မယူ သင့် ဘူး မဟုတ်လား
အပေါ် က ဆရာအဘဖေါ၊ဆရာမ မိုချို၊ ဆရာ ဆာမိ၊ဒေါက်တာ ပဒုမ္မာ၊
တို့ကို အားပေး ဖတ်ရှု့ တဲ့ အတွက် လေးစား ကျေးဇူးတင်ပါမိတယ်။
သြော်..ညီမလေးက အချစ်ကို ကိုးကွယ်သတဲ့လား..
Shar Thet Man (94498 Kyats )